Nhau - Yakagadzirira Kudzidza Zvakawanda nezve CNC muchina?
1.What Chii CNC machine?
Iyo CNC maitiro ndiko kupfupiswa kwe "komputa yekuverenga kudzora", iyo inopesana nezvikanganiso zvemanyore kudzora, nekudaro ichitsiva izvo zvisingakwanisike zvemanyore kutonga. Mukudhirowa manyore, wepa-saiti opareta anodikanwa kuti akurumidze uye atungamire iko kugadzirisa kuburikidza nemufaro, mabhatani, uye mavhiri Turu mirairo Kune anotarisa, CNC system inogona kufanana neyakajairika seti yemakomputa, asi mapurogiramu esoftware uye zvinyaradzo zvinoshandiswa muCCC machining zvinosiyanisa kubva kune mamwe marudzi ese ekomputa
2.Mabatiro eCCC Anoshanda Sei?
CNC maturusi emuchina anoteedzera rairo dze pre-programmed komputa software. Iyo purogiramu inotsanangura kumhanya, kufamba, uye chinzvimbo chemuchina kuti uwane chimwe chimiro chechimiro. Iyo CNC machine maitiro inosanganisira anotevera matanho:
Kushanda muCAD: Vagadziri vanoshandisa komputa-inobatsira dhizaini (CAD) software kugadzira 2D kana 3D mainjiniya madhizaini. Iyo faira inosanganisira zvirevo senge chimiro uye zviyero, izvo zvinotaurira iyo CNC muchina maitiro ekugadzira chikamu.
Chinja maCAD mafaira kuve CNC kodhi: Sezvo maCAD mafaera anogona kushandiswa mune akawanda maficha, vagadziri vanofanirwa kushandura CAD dhizaini kuita CNC inoenderana mafaira. Vanogona kushandisa zvirongwa zvakadai semakomputa-anobatsira kugadzira (CAM) software yekuchinja iyo CAD fomati kuve CNC fomati.
Kugadzirira kwemuchina: Mushure mekuti vashandisi vave nemafaira anoverengwa, vanogona kumisikidza muchina vega. Ivo vanobatanidza yakakodzera workpieces uye maturusi ekuti chirongwa chite nenzira kwayo.
Maitiro ekuuraya: Mushure mafaera nemuchina zvishandiso zvagadzirwa, iyo CNC opareta anogona kuita yekupedzisira maitiro. Ivo vanotanga chirongwa uye vozotungamira muchina kuburikidza neese maitiro.
Kana vagadziri nevashandisi vapedza maitiro aya nenzira kwayo, CNC maturusi maturusi anogona kuita mabasa avo nemazvo uye nemazvo.
3.Mashandiro eCCC Anoshanda Sei?